Moa ve ny orinasako ho mpilatsaka ho fidiana ho an'ny backlinks mamorona?
Vondron'olona an-tserasera goavana izay manana teti-bola ao amin'ny ekipa SEO ao an-trano ary vonona hampiasa vola midadasika amin'ny teknika fanatsarana rehetra izay manana fahafahana hamokatra backlinks. Na dia izany aza, ho an'ireo orinasa madinika na eo an-toerana izay miezaka ny hijanona ho vola be, ny fanorenana rohy dia mety tsy tetik'ady izay mendrika ny fampiasam-bola.
Ndeha isika hifanakalozantsika raha ny fomba fampiasana rohy dia fitaovana mahomby ho an'ny orinasam-pandraharahana vao haingana, na tsy misy dikany ny mampifanaraka ny endriky ny rohy ivelany eo amin'ny tsipika fanatsarana.
Fiverenana mety ho azonao avy amin'ny fanorenana rohy
Andeha hojerentsika akaiky ny fifandraisana misy eo amin'ny tranokala ary ahoana no ahafahantsika manatsara ny tranonkalantsika. Ity teknika fanavaozana ivelany ity dia ampiasaina hampisehoana ny karoka fitadiavana ny habetsaky ny tranonkalanao. Rehefa manombana ny lohamilina fikarohana momba ny loharanon'ny tranonkala dia mendrika ny laharana avo indrindra amin'ny pejy valin'ny fikarohana, dia mandinika manokana ny maha-zava-dehibe ny fanontaniana sy ny fahefan'ny tranonkala. Izany dia manampy ny Google izay manome lanja ny valin'ny fikarohana. Google dia manombantombana ny fahefan'ny tranonkala mampiasa maromaro, ny tena manan-danja amin'izy io dia ny isa sy ny kalitaon'ny rohy ivelany izay manondro loharano iray.
Ny ambony kokoa ny fahefana amin'ny rohy, ny lanja kokoa ny tranokalanao dia afaka mandalo. Ny fahefana backlinks dia voafaritra amin'ny laza sy ny fahamendrehan'ny loharanon'ny rohy ary ny maha-zava-dehibe ny votoatiny izay napetraka ity rohy ity. Raha manaraka ny backlink manokana ny mpampiasa, dia azo raisina ho kalitao sy avo lenta.
Mitondra tombontsoa maro ho an'ny tranonkala ny fananganana tranokala. Andeha isika handinika sasantsasany amin'izy ireo:
Ny rohy an-tserasera dia afaka manentana ny fahefam-panorenana ao amin'ny tranokalanao na manangana fifamoivoizana amin'ny pejy manokana avy amin'ny loharanon'ny Internet anao izay asehon'ny rohy. Vokatr'izany, Google dia hijery ny toerana misy anao ho mendri-piderana kokoa ary hanome ny toerana misy anao ho laharana ambony ary mandefa fifamoivoizana bebe kokoa any amin'ny tranokalanao.
Fifamoivoizana amin'ny fifamoivoizana
Ny fampidiranao ny rohy amin'ny lahatsoratra an-jatony sy ireo endrika hafa amin'ny votoaty ivelany, dia mitondra fifamoivoizana ianao mankany amin'ny tranokalanao. Raha ny rohy misy anao dia mifototra amin'ny votoatin-kalitao sy ny fikarohana mifototra izay hanome lanjany ho an'ireo mpihaino anao, dia hahazo traikefa avy amin'ny mpampiasa mivantana ny rindran-kaonty mivantana ianao raha mila fanazavana fanampiny.
Fanentanana ny afo
Raha mbola manonona foana ny anaranao amin'ny marika ao amin'ny lahatsoratra sy lahatsoratra amin'ny tranonkala hafa ianao, na ho ela na ho haingana, Ireo mpampiasa dia hitadidy izany. Ary na dia tsy mikitika ny rohy aza ireo mpampiasa ireo, dia hanatsara ny fisehon'ny marikao ianao.
ROI (fiverenana amin'ny fampiasam-bola) Backlinks dia mety maharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra, izany no mahatonga ny lanjan'izy ireo hitombo tsikelikely. Raha mampiasa ny volanao amin'ny fametrahana rohy maharitra eo amin'ny iray amin'ireo tranonkala ambony indrindra ianao, dia hahazo fiverenana goavana amin'io fampiasam-bola io ianao amin'ny endrika fifamoivoizana tsy tapaka sy ny fiovam-po Source .